I-AIO evaporative Condenser
■ Ukusebenza okuphezulu, ukonga umbane kunye nokukhuselwa kwendalo
■ Ubume beCompact, ukufakwa ngokulula
■ Kulula ukuyisebenzisa, ikhuselekile kwaye ithembekile
■ amandla Strong anti-umhlwa, ubomi inkonzo ixesha elide
•Phambi kwemigaqo yokutshintshiselana ngobushushu kunye noyilo lobunini.
•Izinto zokwakha: Iyafumaneka ngesinyithi, i-SS 304, i-SS 316, i-SS 316L.
•Umsebenzi omncinci, imveliso enkulu yobushushu
•Inkqubo ePhakamileyo yoLawulo lweTekhnoloji yokuhambisa ukusebenza ngokuGqwesileyo kunye nokuGcina
PUmgaqo wokuSebenza: Inkqubo eDityanisiweyo yeSkid esekwe kwiPakethi ihambisa ukusebenza ngokukuko, ukuGcina amandla, ukuGcina indawo kumthengi. Inkqubo yeCharge Ammonia Charge ithetha umngcipheko ophantsi, ulondolozo oluncinci kunye neendleko zokusebenza eziphantsi.
UmThengi kufuneka abonelele ngamanzi, umbane kunye nonxibelelwano oluthile kumbhobho ukuze inkqubo iqhubeke kwaye iqhubeke. Inkqubo ye-All-In-One ithetha ukunciphisa iindleko zothutho kunye neendleko zomsebenzi ezisezantsi zokufakwa.
Ikwagcina inkqubo icocekile, ukunciphisa ukubetha, kunye nokugcinwa. Ukucwangciswa kweskid kuthetha ukuguquguquka kunxibelelwano lwamanzi / lombane kunokuba kwicala lasekhohlo okanye lasekunene lomatshini. Zonke iingxaki zesiza malunga nokuFakelwa, ukuThuthwa kunye nokuPhathwa kweMathiriyeli ziyasuswa.
•IMetro •Icandelo leMichiza
•IZiko leDatha •Umkhenkce
•Ukutya kwaselwandle •Indawo yotywala
Egqithileyo I-Evaporative Condenser-Counter Flow
Inkqubo yeGumbi eliBandayo leFriji
Iinkqubo zeFriji yoShishino
Isikhenkcezisi Kwi-Condenser Kwinkqubo yeFriji